Nhau - Main Kufunga
Imwe yekutarisa kwako kwekutanga ichave kuchengetedzeka. Zvakachengeteka here kuti uve nemidziyo kumba? Hutano hwako hwakamira sei? Une vana here? Kana iwe ukaitika kuva nezvinetso zvehutano, bvunza nachiremba wako uye uve nechokwadi chekuti kuunza chirongwa chitsva chekudzidzisa chakachengeteka kwauri. Mimwe michina yakakosha; funga kana iwe uchizoda kuifambisa nguva dzose, sezvo izvi zvingave zvinonetsa mumuviri wako. Kana zvichibvira, edza izvozvo (kana zvakafanana michina) kunze usati watenga. Zvingave zvakakodzera kubvunza iwo maonero emunhu wega mudzidzisi usati waita.
Ive nekuchengera pamusoro pezvinotaurwa nevanhu pane zvekusimbisa muviri, kwete zvese zviri mugwara. Vamwe vanhu vane ruzivo rwakashata nechimwe chidimbu chemidziyo uye vanodzivisa iyo mhando yese. Vamwe vanhu vanoumba mafungiro avo zvichibva pane zvavanenge vanzwa. Mhinduro yakanakisa ndeyekuita yako tsvagiridzo uye kana usina chokwadi, taura nesu usati watenga.
Ehezve, iwe unofanirwa kufunga nezvenzvimbo yauinayo kumba. Vamwe vatengi vanokanganwa kufunga kwakakomba uku. Funga kwekuisa michina usati watenga. Imba yako inogona kunge isingakwanise kutora michina. Inoita zvirongwa uye ive nechokwadi chekuti muchina unokwana zvakanaka munzvimbo yauinayo. Kana usina chokwadi taura nesu, uye isu tinogona kukuraira iwe pane inodiwa nzvimbo yechero chidimbu chemidziyo.
Chii chako Bhajeti?
Nguva dzose funga kuti une marii uye yaunoda kubhadhara mari yezvigadzirwa. Isu tinowanzo kurudzira kuisa mari mune yakanakisa michina iwe yaunogona kutenga sezvo iwe uchizonyanya kuzvipira pakutenga uye zvakare uchanakidzwa nemidziyo zvakanyanya. Vamwe vanokurudzira kutenga zvakachipa sezvo iri shoma yenjodzi, zvisinei kazhinji paunotenga zvakachipa unowana ruzivo rwakashata uye uchademba kutenga.
Uyu mubvunzo wakakomba. Midziyo yacho inodiwa here? Inoenderana nezvinangwa zvako zvemuviri, zviitwa zvaunoda kuita, chikamu chemuviri chauri kutarisa kana chero kurudziro yakapihwa? Kurovedza muviri kunofanira kunge kwakaoma asi kunonakidza. Kunyangwe iyo yakanaka michina yekusimba inongoshanda chete kana iwe uchiishandisa nguva dzose! Zvakawanda zvemidziyo yedu yekusimbisa muviri inochinja-chinja, saka unogona kugona kuchengetedza mari nekutenga chimwe chinhu chine zvimwe zvinhu pane kutenga zvinhu zvakati wandei zvebasa chairo.
Edza usati watenga
Usati waisa mari mune chero michina, funga kushanyira nzvimbo yekurovedza muviri kutanga uye kuyedza imwecheteyo michina kuti uone kana uchifarira kuishandisa. Hazvireve hazvo kuti inofanira kunge iri yeYork Fitness michina, sezvo ichiri kukupa iwe pfungwa yekufamba uye kushandisa. Mazhinji majimu anopa kudonhedza muzvikamu kwemubhadharo mudiki, zvichikubvumidza iwe kuyedza zvidimbu zvakasiyana zvezvigadzirwa zvekusimba muchikamu chimwe chete.
Funga kufonera vatengi.
Kana uine kusahadzika kana mibvunzo zvachose usazeze kufonera vatengi vedu. Chikwata cheYork Fitness chinoziva mune zvese zvishandiso zvedu uye chinogona kukupa mazano akanaka ekuchengetedza mari uye kuwana zvakanakisa kubva kumba kwako kwekurovedza muviri. Chinangwa chedu ndechekukupa iwe chakanakisa chiitiko kana iwe ukatenga michina yekusimbisa muviri kubva kwatiri.